Wasaaradda Haweenka oo Tababar ku Saabsan Dhowrista Xuquuqda Carruurta u Qabatay Ururro-SAWIRRO – Radio Muqdisho
Wasaaradda Haweenka oo Tababar ku Saabsan Dhowrista Xuquuqda Carruurta u Qabatay Ururro-SAWIRRO
Wasaaradda Haweenka iyo xuquuqda aadanaha ayaa maanta tababar ku saabsan dhaqan gelinta heshiiska caalamiga ah ee carruurta u qabatay wakiilo ka socday qaar ka mid ah ururrada bulshada rayidka ah ee magaallada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan saxiixday xeerkan caalamiga ah, tababarkaan ayaa si gaar ah ugu saabsanaa carruurta la askareeyo iyo kuwa da’doodu yartahay ee lagu shaqeysto.
Agaasimaha maamulka ee wasaaradda, Bile Ismaaciil Diiriye ayaa sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo xuquuqda carruurta, isla markaana la daryeello.
Ka qeyb galayaasha ayaa soo jeediyay warbixinno iyo aragtiyo muujinaya tallaabooyinka la qaadi karo si bulshada loogu wacyi geliyo in ay dhowraan xuquuqda carruurta.
Faadumo Maxamed Cali oo ah agaasimaha waaxda Qoyska iyo daryeelka carruurta ee wasaaradda Haweenka iyo xuquuqda dadka, ayaa tilmaantay in loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay xormeeyaan xuquuqda carruurta, taas oo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeedba ay dhowreen.
Dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika, waxaa la shaqaaleysiiyaa carruur badan oo da’doodu ka yartahay 18 sano, qaarkood ayaa loo adeegsadaa dagaallada. Halka kuwa kale ay ka shaqeeyaan shaqooyinka wax-soo saarka, beeraha iyo howlo kale.
Sheekh Shariif “Waxaan aad uga xumahay dagaalada ka dhacay Gaalkacyo”
Sheekh Shariif “Waxaan aad uga xumahay dagaalada ka dhacay Gaalkacyo"